डा. केसिको अन्सन ७ बुँदे सहमतिमा तोडियो - Pardeshi Khabar
परदेशी खबर/ २६ जुलाइ, कुवेत। २७ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ता टोलीले सात बुँदे सहमति गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा बिहीबार भएको वार्ता सात बुँदे सहमति गरेर वार्ता टुंगिएको हो । सहमतिको मस्यौदालाई औपचारिकता दिने काम भइरहेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य केदार न्यौपानेले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।
अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरिएको।
« डा.केसीको मागमा देउवा र थापा चिप्लिए (Previous News)
(Next News) प्रमुख रोजगार गन्तव्य ९ देशसँग दोहोरो श्रम सम्झौताको तयारी »